Kobaca CBD oo dib u dhacay 2021 • Daawooyinka Inc.eu
Bogga ugu weyn Saamiyada & Dhaqaalaha Kobaca CBD ayaa hoos u dhacaya 2021
maqaal by Ties Inc. 20 May 2022
Sababo la xiriira cadaadiska qiimaha iyo u wareegitaanka alaabooyinka jaban, guud ahaan kobaca warshadaha CBD ayaa hoos u dhacay 2021, marka loo eego cusboonaysiinta warshadaha suuqa ee kooxda Brightfield. Iyadoo ay sii socoto dib u dhac ku yimid xeerka FDA, balaadhinta tafaariiqda ayaa ah mid dhexdhexaad ah.
1 Shirkadaha cbd saamiyada suuqa
3 Isticmaalka macaamiisha
Iyadoo la eegayo qaybta labaad ee 2021, shirkadaha ugu sarreeya ayaa ah kuwo aan isbeddelin marka loo eego qaybta hore. Gummies waxay ahaayeen mid ka mid ah wax soo saarka CBD ee ugu weyn ee 2021.
Shirkadaha cbd saamiyada suuqa
Inkasta oo 20-ka shirkadood ee ugu sarreeya ay kordhiyeen saamigooda rubuci afraad, isbeddelkani ma ahayn mid muhiim ah oo ku filan in uu si buuxda u xoojiyo saamigooda suuqa. Farsamooyinka ay shirkaduhu adeegsadeen rubuci afraad ee 2021 iyo horraantii 2022 si ay u kordhiyaan kaydkooda guud waxa ka mid ah.
Soo saarista alaabada ay ku jiraan cannabinoids yar yar sida CBDA iyo CBGA si ay u muuqdaan.
Xayeysii alaabtooda si ay ugu jiraan THC si ay uga faa'iidaystaan ​​macaamiisha ku nool gobolada aan lahayn barnaamijyada la nidaamiyay ee isticmaalka dadka waaweyn. Tani adiga oo ka hooseeya xadka sharciga ah ee 0,3% ee loo ogol yahay iibinta alaabada hemp-ka soo baxda.
Sii wad inaad balaadhiso iskaashiga tafaariiqda ee dukaamada madaxa banaan.
U diyaargarowga kordhinta joogitaankooda gobolada dhawaan ansixiyay sharcigooda si ay u xakameeyaan CBD, sida California.
Qaar badan oo ka mid ah hal-abuurka cusub ee gummies-ka ayaa ka yimid shirkado isku dara nacnacooda maaddooyinka shaqeynaya si kor loogu qaado waxtarka. CBD waa, tusaale ahaan, lagu daray xanjo leh caffeine, L-Theanine iyo fitamiin B12.
Alaabooyinka Gummy waa nooca afraad ee ugu dhaqsaha badan u koraya inta lagu jiro xilliga saadaasha, in kasta oo laga bilaabo 2021 oo leh mid ka mid ah saldhigyada iibka ee ugu weyn. Waxa la filayaa inay si weyn uga faa'iidaystaan ​​muddada dhexe ee qaab-dhismeedka sharciyeedka qaranka, iyaga oo ka iibinaya fiitamiinnada caadiga ah iyo kaabayaasha.
Isticmaalka CBD ee iibsadayaasha alaabada ayaa si joogto ah u kordhay muddada 2021, iyada oo in ka badan 45% kuwa la sahamiyay ay soo sheegeen isticmaalka maalinlaha ah ee alaabada CBD rubuci afraad. Intii lagu jiray 2021, kororka isticmaalka culus wuxuu ahaa mid ka mid ah darawallada ugu waaweyn ee suuqa guud ahaan.
Iyadoo soo jiidashada macaamiisha cusub ay fure u noqon doonto kobaca ka dib kordhinta qaanuunka CBD, ka faa'iidaysiga macaamiisha jira ee alaab tayo leh ayaa muhiim u ah kordhinta iibka muddada gaaban. Kooxda Brightfield waa shirkad cilmi baaris oo loogu talagalay qaybaha soo baxaya oo ay ku jiraan CBD, xashiishadda iyo fayoobaanta.
Xigasho: cstoredecisions.com (EN)
FDA waxay uga digaysaa shirkadaha iibinta sharci darrada ah ee…
Suuqa xashiishku ma naarta ayuu gelayaa?
CBD iyo warbaahinta bulshada
Xawaaladahan ayaa caqabad ku ah warshadaha dawooyinka...